Llanwnnen, Wales, United Kingdom
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguClaire
IiHolide zeFama zaseWinllan zibonelela ngokuzola, ukuhlala ngokuzolileyo emaphandleni, emaphandleni aseWales. IiPod zethu zixhotyiswe kakuhle kwaye zibonelela ngayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale kakuhle.
Ifakwe kumgama oziikhilomitha ezi-5 ukusuka eLampeter kunye neekhilomitha ezili-12 ukusuka kunxweme lwaseCardigan Bay sibekwe kakuhle ukufikelela kuzo zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi kunye nezinto eziluncedo zalapha ekhaya. Ukuba yindawo encinci ungaphumla ngokwenene kwaye uphumle.
Uyakubuliswa xa ufika ukuba unikezele isitshixo kwaye uboniswe malunga nendawo yokuhlala. I-Pod inegumbi layo lokuhlambela kunye ne-Basin kunye neToilet. Ikhitshi elincinci elineketile, itoaster, imicrowave kunye nefriji encinci. Kukho ifreesat tv kunye nesidlali seDVD. Iiduvethi, imiqamelo, iitawuli kunye netawuli yeti zikhona. Ibhedi ephindwe kabini iya kwenziwa njengomgangatho wokubhukisha i-2, nceda usithumele umyalezo ukuba ufuna ukusebenzisa ibhedi yesofa nayo.
Ipakethi encinci eyamkelekileyo yeti, iibhiskithi zekofu kunye nobisi zinikezelwe ekufikeni kwakho. Ngaphandle yitafile ye-bistro kunye nezitulo ezi-2 kwindawo ehonjisiweyo kunye nomgodi womlilo ophindwe kabini njenge-bbq kunye nebhentshi yepikiniki kwigrabile. Kwisiza kukho igumbi loncedo elinohambo olwahlukileyo kwishawari, indlu yangasese, ingqekembe yempahla esetyenziswayo yokuhlamba impahla, ifriji eyongezelelweyo, imidlalo yangaphakathi nangaphandle, iincwadi, iiDVD kunye nalo lonke ulwazi lwabakhenkethi basekhaya kunye neencwadi kwindawo yasekhaya.
ILampeter yeyona dolophu ikufutshane, kumgama oziikhilomitha ezi-5. Ineevenkile ezinkulu ezi-2, iikhefi, iindawo zentselo, iibhanki, ikhemesti, oogqirha bezilwanyana kunye neevenkile ezininzi zalapha ekhaya. Kukho isikhululo sePetrol esikumgama oziikhilomitha ezi-3 esinendawo yokusika iindleko kunye neposi eqhotyoshelweyo. Indlu kawonke-wonke ekufutshane ikwiikhilomitha ezi-2 eLlanwnnen.
Sihlala kwindawo ngoko siyafumaneka kuyo nantoni na iindwendwe zethu ezinokufuna. Ii-imeyile kunye neenombolo eziphathwayo zikwanikezelwa kwiindwendwe ukuba ziyazifuna.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Llanwnnen